Obama Ma Vista Xiga? | Martech Zone
Obama Ma Vista Xiga?
Isniin, November 3, 2008 Khamiis, Juun 2, 2015 Douglas Karr
Waa habeenki kahoreeyay doorashadii 2008 walina kuma faraxsani xulashada berri. Kama caawin karo laakiin waxaan la yaabanahay haddii Barack Obama uu si fudud u yahay Vista:
Miisaaniyadda suuqgeynta weyn.
Lagu dhajiyay bedel.
Balanqaadyo xasilooni weyn.
Amniga oo hagaagay.
In yar ka qaalisan.
Warbaahinta iyo khubarada ayaa ugu yeeray guul Obama horeyba. Dhawr bilood gudahood, waxaan la yaabanahay haddii Mareykanku rajayn doono a hoos u dhig, ama xitaa fursad aad ugu beddelato a Mac. (McCain, taasi waa).
Tags: Doorashada 2008barack obamadoorashadaobama
Dadnimada iyo Aaminaadda Blogging
Intii kadambeysay Booskeyga Weyn ee Siyaasadeed
Nov 3, 2008 saacadu markay tahay 11:37 PM
Tweet ugu fiican maalinta!
TX 4 dhajinta tan.
Siyaasaddu waxay u baahan tahay nasasho kaftan ah
Nov 3, 2008 saacadu markay tahay 11:54 PM
Waan ka xumahay dadyowga, waa inaan nadiifiyaa faallooyinka ku jira qoraalkan ka dib markii ay ku xadgudbeen siyaasadayda faallooyinka.
Nov 3, 2008 saacadu markay tahay 11:56 PM
OpenMinded waxay leedahay xoogaa dhibco wanaagsan. U yeerida lowska maadama aadan ogolaan runti waa astaan ​​jaahil ah. Waxaan arkay inaad tirtirto jawaabtiisa laakiin waa qiil loo helay. Aniga oo halkan aqriste ku ahaa muddo labo sano ah Douglass, wax yar ayaan kaa bartay adiga iyo sida aad u doorato inaad faafreeb ku sameyso faallooyinkaaga. Ma ku hagaagsan tahay inaad uga tagto dadka kale faallooyin ay kula mid yihiin kuwaaga kaliya laakiin ka saar kuwa aan kuu diidin oo u canaanto natiijadaas?
Ma ahan martigaliye aad ufiican Douglass waxaan aqrin doonaa wax kayar bartaada mustaqbalka. Waan ka xumahay
Nov 4, 2008 at 12: 24 AM
Dhab ahaan, kuma diidin qodobbada OpenMindedNut gabi ahaanba. Xaqiiqdii, waan ku raacay dhammaantood marka laga reebo weerarkiisa shaqsiyeed in kani uu ahaa boosteejo 'aan qaan gaarin'. Sidoo kale, uma aanan wicin Nut. Wuxuu isku magacaabay Nut. Weerarkiisii ​​labaad ee shakhsi ahaaneed ee uu igu qaado wuxuu igu dhaliyay inaan hoos u dhigo silsiladda faallooyinka. Fadlan aqri siyaasada faallooyinka, looma badalin bilo badan, bilo badan.
Waan necbahay inaan ku waayo adiga aqriste, laakiin fahan in aan isku furay si ay dadyowgu ugu baxaan weerarka. Waxaan qaadaa qaar ka mid ah mas'uuliyadda.
Nov 4, 2008 at 12: 38 AM
Ma iibsado Douglass. Waxaad dooratay inaad sameyso nooc jees jees ah oo kusalaysan username. "Nut" macnaheedu waa waxyaabo badan. Ma noqon karto waxaad u maleyneysay inay ula jeeddo. Wajaho, waxaad khalad aad u xun ku sameysay halkan xukun xumo. Mawduuca qoraalkiisa ayaa ka nuxur badnaa qoraalkaaga blog.
Aabahay shaqadiisii ​​ayuu ku waayey shalay 32 sano warshadda. Shaqo la’aanta ayaa ku sii kordheysa dalkan. Halkii aad ku jees jeesi laheyd oo aad ka caban lahayd xaalada maxaa xal u keeni waayey Ninkaaga suuq geynta sida inteena kale. Cabashadu waa cudur dalkan ka jira. Ka sokow, waxaad banaanka u dhigtay inaad dareentay in Obama uusan u fiicnayn dalkan - adigu waxaad billaabatay qoraalkan. Qaar badan oo kamid ah akhristayaashaada ayaa ku aqriyay iyaga oo ay la socdaan faalladaada iyo ka saarista fikradda qof ee dambe
Waxaa laga yaabaa inuu qofku dareemay in qoraalkaagu uusan u bislayn xaalada jirta awgeed iyo in jees jees ama ka cabasho "waxa soo socda" ay calaamad u tahay bislaansho la'aan. Waxaa loo aqrin karaa siyaabo kala duwan.
Hadda ma ahan waqti ku habboon in lagu kaftamo doorashooyinka. Waxaa jira dad halkaas jooga oo waayaya shaqooyinkoodii iyo guryahoodii aad ogtahay? Waxaa laga yaabaa inaad noloshaada degto oo aad xasilloon tahay laakiin ka fikir 60%-ka kale ee dalkan, haddii aysan ahayn adduunka la dhibaataysan 2-dii bilood ee ugu dambeysay ee dhaqaale xumida.
Xaqiiqdii waxaan u maleynayaa inaad u ogolaatay maskaxdaada inay soo dhex gasho tan oo aad ku guuldareysato inaad aqriso inta udhaxeysa khadadka.
Nov 4, 2008 at 12: 48 AM
Waxaad siisaa OpenMindedNut faa'iidada shakiga. Waxaan jeclaan lahaa inaad adigu isla waxtarkaas i siiso. Hadaad jeceshahay inaad siyaasada khadka tooska ah igagala hadasho, waan hubaa inaad aragtidayda aad uga duwanaan doonto sida loogu sawiray halkan qoraalkan.
Waa maalin aad iyo aad u murugo badan dalkan in qofna uusan su’aal ka weydiin karin dhinac ama dhinac iyadoo aan dadku helin xumaan, xanaaq iyo iska horimaad. Aad ayaan uga xumahay, runtii.
Nov 3, 2008 saacadu markay tahay 11:59 PM
Wow waxaan kaliya aqriyay jawaabtaada OpenMinded. Taasi waxay ahayd jawaab aad u hooseysa oo aad siisay isaga oo ka saarista faallooyinkiisa ayaa waliba ka sii darnayd. Mar dambe ma aqrin doono bartaada.
Nov 4, 2008 at 12: 07 AM
Waan ka xumahay inaan maqlo taas Trisha (dhab ahaan). Ma aanan dooneynin in fekerkan faallooyinka ahi isu beddelo bashaas bidix ama midig midigta bidix midab-kala-sooc ah oo inta kale ee Internetku isu beddeleen.
Naanaysta OpenMindedNut waa 'OpenMinded' iyo 'Nut'. Ma samayn naanaysta, wuu sameeyay. Waxaan si fudud u xasuusiyey taas. Sidoo kale, weerarkiisa shaqsiyeed ee boostada 'aan qaan gaarin' wuxuu jabiyay siyaasada faallooyinka. Weerarkiisii ​​xigay xitaa wuu ka sii liitay.
Nov 3, 2008 saacadu markay tahay 11:18 PM
Waad saxan tahay… aan rajaynno waxa ugu fiican!
Nov 4, 2008 saacadu markay tahay 9:38 PM
Wadahadalkeennu had iyo jeer wuxuu ii xaqiijiyaa inaad tahay qof madax bannaan oo aanad jamhuuriyad ama dimuqraadi ahayn. Nasiib darrose waxaad dooratay inaad sameysid shay kaftan ah oo ku saabsan dimuqraadiyadda. Waa inaad ogaataa hadda inay yihiin xisbiga "xasaasiga ah" waxayna ku muujinayaan jawaabtooda. Dadweynow - qaddarin yar u haysa kaftanka ciyaarta!
Nov 3, 2008 saacadu markay tahay 11:22 PM
Sidoo kale, waxaan ku doodi lahaa in ka beddelashada Vista ilaa XP loo tixgelin doono casriyeyn… kaliya 2 senti ah. 🙂
Nov 4, 2008 at 12: 25 AM
Waxaan ku arkay faallooyinkaas OpenMindedNut. Waxaan u maleynayaa inay ahayd qoraal wanaagsan. Douglass, maahan waqtigii lagu kaftami lahaa siyaasadda. Dadka halkan ku nool Mareykanka iyo caalamkaba dhaawac dhaqaale ayaa soo gaaraya, iyagoo waayaya shaqooyinkoodii, guryahoodii.
Run ahaantii, wax khalad ah kamaan helin qiimayntiisa. Wuxuu lahaa qodobo aad u sax ah. Maxaad uga saartey? Weerarkiisa waxay u badan tahay inuu sabab u ahaa weerarka aad ku qaaday isaga, adoo ugu yeeray lowska. Taasi waxay ahayd jawaab liidata oo idinka timid.
Markuu arkay inuu xoogaa fikrad ah geliyay faalladiisa oo aysan ahayn hal xariiq, maxaad isaga damisay? Waan ka xumahay Douglass laakiin anigu kuguma raacsani halkan. Ka ciyaarida doorka dhibanaha oo aad ugu yeerto "liid" waa calaamad muujinaysa inaad isku dayayso inaad qariso aragtidaada.
Sidan oo kale, haddii akhristayaasha balooggaagu ay dareemaan inaysan is muujin karin adigoon ugu yeerin magacyo, markaa runtii ma jirto sabab in badan oo naga mid ahi ay halkan wax ugu darsadaan.
Nov 4, 2008 at 12: 36 AM
Waxaad sameysaa qodobo aad u ansax ah. Sinnaba ugama jeedin faafreebka OpenMindedNut (Nut WAS magaciisa). Waan ku qanacsanahay banter ixtiraam leh halkan waxaanan rajeynayaa inaad ku dhegto.
Nov 4, 2008 at 12: 59 AM
Waxaan arkay isweydaarsiga faallada… maxaa si xun ugu dhacay oo meesha looga saaray? Miyaad adigu aad u xasaasi tahay?
Anshaxeedkeeda caanka ah ee loo yaqaan 'blog' ee ah in markaad wax u dhigayso sidan oo kale, inaad ka filato jawaabaha laga yaabo inaanay kula heshiin. Laakiin ka saariddiisu, waa mid aad u liidata oo waxay leedahay waxaad haysataa wax aad qariso. Haddii aadan qaadan karin dhaleeceynta (oo runtiina waad bilowday), markaa waa inaadan qorin. Faafreebkaaga akhristayaashaada iyo dareenkaaga wax badan ayaa adiga kugu saabsan.
Wax kasta oo OpenMindedNut wax ka qoray waa runti aad u qurux badan. Qiimeynta Bush ayaa ah tii ugu hooseysay taariikhda. Waxaa laga yaabaa inaad taas Google. Dalka intiisa badani ma jecla wiilka oo ma sugi karaan inta uu ka baxayo. Waxaan dooneynaa inaan aragno isbedel. Shaqo la'aantu sidoo kale waxay kor ugu sii kacaysaa tobaneeyo sano. Miyaadan dhag u dhigayn? Mise waxaad ka maqantahay oo keliya madaxaaga dhagax hoostiisa adiga oo rajeynaya inay wax isbeddelaan?
Waxaan ahay Jamhuuriya. Anigana qalad weyn ayaan ku galay Bush markii labaad. Inaadan fursad siin Obama oo aad ku qorto qoraalkaaga waa UNAMERICAN. Malaha taasi waa maxay sababta OpenMindedNut u adeegsatay ereyga "bislaan"? Waxaan aaminsanahay inaad adiguba ka qaadatay macnaha qaldan erayga 'lows'. Maalmahan sinta ayaa loogu yeeraa qof lowska maxaa yeelay waxay ku jiraan "wax garanaya" / khabiir ku ah goobahooda.
Si aad u badbaadiso wejiga, waa inaad faallooyinkaas mar labaad dhigtaa oo dadku u oggolaadaan inay akhriyaan. Runteeda marna runta ayaa xanuuneysa. Dhamaanteen waxaan nahay Mareykan, waxaa laga yaabaa inaan bilowno inaan u dhaqano sida oo kale?
Nov 4, 2008 at 1: 09 AM
Yikes! Maaha waqti lagu kaftamo siyaasadda? Miyaad damineysaa TV-ga markasta oo SNL ay tabiso mid ka mid ah tayadooda? Doug wuxuu kaliya la wadaagay fikrad ah hubin la'aanta uu ka qabo doorashooyinka berri. Wax fikrad ah kama haysto waxa uu yiri OpenMinded, laakiin sifiican ayaan u aqaanaa Doug oo ha u maleynin inuu waligiis faafreeb ku sameynayo faallooyinka qof sababtoo ah fekerka oo la isku khilaafsan yahay. Siyaasadda faallooyinka waa la dhajiyay oo Doug ayaa dhaqan galiyay. Haddii aadan ku raacsaneyn Doug, jooji akhriska. Meel kale tag, laakiin sidee taasi uga duwan tahay waxa aad adigu naftaada ku xukumayso. Waxaad go'aansaneysaa inaad faafreeb ku sameyso soo-gaadhistaada qof aan kugu raacsanayn. Aragtidayda ayaa ah in qof walba uu dalku ku haysto xorriyatul qowl, taas micnaheedu maahan inay xaq u leeyihiin in la maqlo ama aniga ama qof kaleba waa inaan siino madal. Waxaan aaminsanahay in Doug qoraalkiisu ahaa inuu noqdo mid fudud. Dadku waxay u baahan yihiin inay nastaan ​​oo yara fududaan.
Nov 4, 2008 at 1: 14 AM
Aan ogolaado xaqan… ilaa iyo hada waxaan ahay bislaansho, baruur iyo waxaan ubaahanahay inaan aado cunno, carrab la ', daciif ah, jaceylka Bush, Obama neceb, UNAMERICAN, Caymiska dadka, aflagaadada, uma nixin kuwa' shaqooyinkoodii way lumiyeen, waxaan kaftan uga dhigayaa siyaasadda… noloshayduna way deggan tahay.
Dhammaan maxaa yeelay waxaan la yaabanahay in Obama uu yahay heshiiska dhabta ah ama uusan ahayn, ama wuxuu kaliya qiiqayaa qiiqayga dabadeyda sida siyaasi kasta oo kale oo aan waligay u codeeyay ama ka soo horjeeday.
Wow, raggiin runti sifiican waad i taqaanaan!
Nov 4, 2008 at 1: 34 AM
Aqristeyaal waad aragteen waxaad sameysay Douglass - faafreeb. Qoraalku ma xumayn haba yaraatee. Waxaad ka dhigtay mid xun inay u muuqato mid xun maxaa yeelay heshiis kuma ahayn. Waxaad tahayyyyyyyyyyy xasaasi ah!
Qoraalkan ugu dambeeyay waa mid qurux badan oo akhrinaya sida aad isku dayeyso inaad eedda uga leexiso naftaada si kaftan ah. Waan ka xumahay laakiin tani waa quruxsan tahay curyaannimo!
Nov 4, 2008 at 2: 03 AM
Xaqiiqdii waad saxantahay! OMG! Bal u fiirso boggan faallooyinka - Xaqiiqdi WAAN FARSAMADAY si aan u galiyo iftiin aad uga wanaagsan. Waan hubaa inaan tirtiray dhammaan ra'yihiina aanan ku raacsanayn.
Isku day tijaabo ah.
Nov 4, 2008 at 1: 18 AM
Sug - ninka madow ee qaab iyo soojiidasho leh waa Vista, oo dhakhtarka duugga ah ee duugga ah ee jilicsan ayaa Mac ah? Wow, taasi waa isbarbardhigga ugu dib-u-dhaca ee aan abid maqlo.
Nov 4, 2008 at 1: 31 AM
Waxaa laga yaabaa inaad haysato barta ugu saxsan illaa iyo hadda. 🙂
Nov 4, 2008 saacadu markay tahay 1:25 PM
Kaliya si aan guriga ugu kaxeeyo ujeedkeyga:
Nov 4, 2008 at 1: 20 AM
KA HOR INTA AANAN SHEEGIN: Anigu ma ihi taageere McCain mana ahi taageere Obama.
Xusuusin: Qiimeynta ansixinta koongareesku way ka liidataa qiimeynta oggolaanshaha Bush hadda… Maxaa dhacay laba sano ka hor markii ay dadku kor iyo hoos u boodayeen oo ku saabsan awoodda wareejinta ee shirweynaha? Oo maxaa dhici lahaa haddii John Kerry madaxweyne ahaan lahaa? Dimuqraadiyiintu xitaa fursad ma ku heli lahaayeen Aqalka Cad?
Hal nin mas'uul kama aha hoos u dhaca adduunka! Waa hubaal inuu qaatay go'aanno saameyn ku yeeshay, laakiin inta badan waddankeenna uu marayo waxaa si cad loola xiriiri karaa ku-takrifalka awoodda iyo ku xadgudubka dadka ee Dowladda Federaalka guud ahaan.
Xitaa haddii dadku diidaan waxa ay yiraahdeen labada dhinac, waxaa la sheegay in OpenMindedNut uu ku xadgudbay siyaasadda faallooyinka. Blogger wuxuu xaq u leeyahay inuu faafreeb ku sameeyo waxkastoo uu doono iyo cida uu rabo. Ka dib oo dhan, yaa iska leh websaydhka?
Aabe, anigu aad uma faraxsana berri, sidoo kale. Waxaan marwalba ku farxi jiray ilmo ahaan fikirka ah in maalin uun aan cod bixin karo… iyada oo tani ay tahay doorashadii madaxtinimo ee ugu horaysay ee aan ka codayn karo… aragtida oo dhami waa xumaan iyo niyad jab. Sida lagu sheegay buuga Digniinta Dhiman ee Dimuqraadiyadda… waa wax laga xumaado in markhaati loo noqdo koox ido ah oo dooranaya Sheppard-kooda dambe ee Chief… ha noqdo mid casaan ah ama mid buluug ah.
Nov 4, 2008 at 1: 47 AM
Meeshaad seegtay OpenMindedNut ma jabinayso wax siyaasad faallo ah. Sida aan ka walwalsanahay, isagu sifiican ayuu ugu dhex jiray. Douglass gabi ahaanba wuu si khaldan u turjumay wuxuuna doortay inuu miro galiyo maxaa yeelay kuma waafaqsana fikradiisa siyaasadeed. Ma jirin wax qoraal ah oo aan ansax ahayn. OpenMindedNut wuxuu yiri "bislaan", ma sidaas baa xun? Douglass wuu xad dhaafay waana qof xasaasi ah. Laakiin taasi maahan sabab loo tirtiro boostada ma tahay?
Inta badan dadka halkan ku nool ayaa arkay Haddana Douglass wuxuu sii wadaa inuu isdifaaco sidii inuu yahay dhibbane. Runtii waa wax murugo leh oo murugo leh haddii aad i weydiiso.
Nov 4, 2008 at 1: 57 AM
Maxaad u sheegaysaa in aanan ku raacsanayn waxa uu aaminsan yahay ee siyaasadeed? Runtii waan ku raacsanahay inta badan wuxuu yidhi! Oy. Horeba ugu filan… horay u soco
Nov 4, 2008 at 4: 46 AM
Bedelashada Vista ilaa XP waa casriyayn, OUCH !! (Waa hagaag in kastoo.)
Ku socda madaxweynaheenna soo socda, Barack Obama. Waan ka shakisnaa Obama illaa dhammaadka xagaaga.
Sida ganacsato badan oo si weyn u guuleysta, Barack Obama, warqad ahaan, uma muuqan doono inuu yahay qof ku dhici kara gurigiisa. In kasta oo aanu khibrad u lahayn, haddana wuxuu umuuqdaa inuu noqon karo agaasime guud oo wanaagsan, deggan, xitaa la farsameeyo, macquul ah - aragti fog. IYO, ninku wuxuu muujiyey inuu fulin karo.
Isaga ama isaga oo kale, Obama wuxuu lahaa qorshe weyn, aragti weyn iyo aragti wuxuuna fuliyay si aad ugu dhow dhammaantiis waddanka oo dhan muddada 2 sano ah. Taasi maahan hawl yar oo loo hayo sarkaalka fulinta.
Obama wuxuu dib u bilaabay olole uu ugu jiro xafiiska siyaasadeed ee Mareykanka. Sumad ahaan, wuxuu dib u milicsaday oo uu kala jiiday codbixiyeyaasha wax aan arag intaan noolahay oo kale. Awooda obama ee aruurinta lacago aad u tiro badan oo shaqsiyadeed, kuwa wax ku darsada yar yar, khadka tooska ah waa wax lala yaabo. Taasi waa sax oo malahan wax khiyaano ah.
Obama wuxuu ka tegey meel aan la aqoon 2 sano ka hor una wareegey awooda kaliya ee ugu weyn siyaasada Mareykanka. Hadduu ganacsade ahaan lahaa, shirkadaha VC way baryi lahaayeen inay jadwalkooda la jaan qaadaan, inteenna badana waxaan rajeyneynaa IPO-ga.
Obama sidoo kale nin wanaagsan ayuu ahaa. Taasi si fiican ayey ugu adeegtay.
Haddii uu ka xukumo dhexda, waxaan qabaa inuu noqon doono madaxweyne guuleysta.
Nov 4, 2008 at 8: 55 AM
Waxaan gabi ahaanba ixtiraamayaa wixii ololaha Obama uu sameeyay waxaanan uga hadlay si 'cabsi leh' ololihiisii ​​adeegsiga Internetka iyo awooda suuqgeynta. Waan ku raacsanahay - sida isaga ama ha ahaadee - wuxuu bedelay habka loo maamulo siyaasadda dalkan.
Ujeeddadayda kaliya ee tan waxay ahayd inaan tuuro xoogaa nuglaansho ah (laga yaabee go'aan xun) xaqiiqda ah inaynaan runtii garanaynin wuxuu sameyn doono. Wuxuu sameeyay ballamo badan oo waawayn, laakiin mid kasta oo ka mid ah 5tii doorasho ee aan ka codeeyay, weligay ma arag madaxweyne oo fuliya wixii uu ballan qaaday.
Nov 4, 2008 at 11: 49 AM
Isbarbardhig quruxsan goofy - ka jar 10 daqiiqo 15 daqiiqo oo caan ah.
Nov 4, 2008 saacadu markay tahay 12:28 PM
Waan ka xumahay inaad heleyso nacasyadan oo dhan. Ilaa inta aan ka walwalsanahay waxaan jecelahay akhrinta balooggaaga, iyo laalaadda w / adiga Koobka Bean.
Waxaan xasuustaa mar aan faallo ka saaray golayaasha CNET aadna waan uga xumaaday maxaa yeelay waxaan moodayay inaan faallooyin wax ku ool ah ka bixiyay. Laakiin dhamaadka maalinta waa uun faallo ku saabsan websaydh.
Sii wad waxa aad qabanayso. Oo haddii qofna uusan jeclayn; socod dheer ayey ka qaadan karaan marinka gaaban.
Nov 4, 2008 saacadu markay tahay 2:19 PM
Mahadsanid Scott! Runtii waan ku qanacsanahay inaad ila wadaagtid aragtidaada midkaan.
Nov 4, 2008 saacadu markay tahay 12:37 PM
Ereygaygu wuxuu ka hadlaa dadka falcelinta. Doug Waan ku raaxeystaa bartaada internetka waxaanan u maleeyay in isbarbardhigaaga Vista uu ahaa mid caqli badan. Xaq ayaad u leedahay inaad faafreeb ku sameyso faallooyinka haddii Trish aysan jecleynna waxaan u soo jeedinayaa inay sameyso wixii ay ugu hanjabtay inay sameyso oo ay joojiso akhriska. Sababo jira awgood ma joojin karto soo noqoshada….
Waxaan qabaa ra'yi aan jeclaan lahaa in aan la wadaago inkasta oo…
Anigu waxaan ahay taageere Obama laakiin wali waxaan ku dhajiyay bartaada barta Facebook-ga si fudud sababtoo ah, maahan kaliya maad, laakiin cidina ma diidi karto inay jirto khatar ah in Obama uusan ku noolaan doonin buunbuunintiisa haddii uu galo Aqalka Cad. Waxaan dhamaantiin idiin sheegi lahaa inaan ahay mid ka mid ah ciyaartoyda kubbadda koleyga adduunka ugu fiican. Waan kuu sheegi karayey marar badan laakiin sidee baad waligaa u ogaan laheyd inaad aragtay anigoo u socda maxkamadda NBA oo aan ciyaarayo.
Xitaa Obama laftiisu ma ogaan karo 100% inuu diyaar yahay iyo in kale maadaama uusan horey u sameynin runtiina wuxuu leeyahay khibrad sidaas u yar waana khatar weyn. Taasi macnaheedu maahan inaynaan taageerin isaga? Maya maya, marka la isku dheelitiro shakiga waxaan u maleynayaa inuu sameyn doono madaxweyne weyn laakiin haddii aad i weydiisato inaan si fiican ugu sharfo gurigeyga taasi waa su'aal ka duwan.
Taasi waa sababta dhammaan dimuqraadiyadda reer galbeedka aan u kala leenahay kala saaridda siyaasadda dawladda iyo xisbiyada, waxay aad ugu adkeyneysaa qof walba inuu wax kala shaandheeyo. Waxaan rajeynayaa qalbigeyga oo dhan in Obama uu u hogaansami doono hadaladiisa laakiin hal shay ayaa hubaal ah oo maskaxdayda ku jira, wuxuu qaban doonaa shaqo xun oo ka fiican Bush ama McCain. Waxaan u soo gaadhay go'aankan ma aha sababta oo ah waxaan ku faraxsanahay "Beddel" laakiin waxaan rumaysanahay ka dib markaan falanqeeyo siyaasad kasta in Obama ay u badan tahay inuu sameeyo saameyn dhaqan-dhaqaale oo togan
Taasi waa fikirkeyga !! Fadlan toos ugu dir dhammaan nacaybka emaylkayga shaqsiyeed ILoveFreedomOfSpeech@hotmail.com
Nov 4, 2008 saacadu markay tahay 2:18 PM
Mahadsanid, Shane. Waan ku faraxsanahay in mid ka mid ah taageerayaasha Obama uu u aqoonsaday qoraalka ujeedka loo qoray. Anigu sinnaba iskama dayin inaan liido shaqada uu soo qabtay.
Nov 6, 2008 saacadu markay tahay 5:46 PM
Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay tan ugu miyir qabka badan ee fekerka fekerka leh ee aan aqriyay ee ku saabsan guud ahaan? Obama shaki galinta? Dood. runtu waxay tahay, qofna ma oga waxa uu sameyn doono, labada dhinacba. waa la arki doonaa? .. midkee, waxaan aaminsanahay, inuu ahaa ujeedka Doug. Qof kasta oo akhrisanaya balooggan waqti kasta ha ahaadee wuxuu arki karaa in Doug leeyahay dareen qallal ah oo kaftan ah. Ilaa iyo inta ay tani tahay waqtigii saxda ahaa ee wax lagu kaftami lahaa? Haddii aadan ka qosli karin nolosha iyo waqtiyada adag, markaa waan kaa xumahay. Qosolku wax walba wuu wanaajiyaa. Qosol runtii WA dawada ugufiican. Kaliya b / c waxaan ka qosleynaa wax, macnaheedu waa inaad fududeysay. Waan ogahay inay taasi run ka tahay saaxiibkay, Doug, in kasta oo aan inta badan ku raacsanayn isaga, siyaasad ahaan hadalkayga. 🙂
Nov 4, 2008 saacadu markay tahay 3:02 PM
Markaad dadka kale dhaleeceynayso (isbarbardhiga Obama iyo VISTA waa kaftan xun oo sidoo kale lagu dabaqi karo McCain) waa inaad ka warqabtaa in kuwa kale ay adiga kugu dhaliili karaan.
Haddii aadan u adkeysan karin, ha naqdin!
Faafreebka waa shay xun !!!
Nov 4, 2008 saacadu markay tahay 3:23 PM
Waad ku mahadsantahay boostada. Waxaan ka helay wax lagu qoslo. Waan ka xumahay akhristayaashaada qaar waa doqomo. Hadda waxaan RSS ka aqrin doonaa boggan, si aan uga caawiyo dib u soo celinta khasaaraha.
Nov 4, 2008 saacadu markay tahay 4:11 PM
Iyada oo laga jawaabayo qoraalkaaga:
Farqiga ugu weyn ayaa ah in codbixiyeyaasha aan laga codsanayn inay halis galiyaan dhammaan xogta ay hayaan iyo codsiyada ay hayaan, inay lacag ku bixiyaan kor u qaadista ama inay bartaan nidaam cusub oo hawlgal. Xaqiiqdii, waxaa loo ballanqaadayaa canshuur celin haddii ay kaliya beddelayaan beddelaad cayiman. Microsoft (ama bixiye kasta oo tikniyoolajiyad ah) waa inuu heystaa si aad u wanaagsan.
Jawaabta faallooyinka ku saabsan OpenMindedNut:
Marnaba ma arkin qoraalkiisa mana haysto wax faallo ah marka laga reebo in aan ku idhaahdo boggeyga, waxaan go'aansadaa waxa qoraallada sii joogayaan iyo wixii aan qorin. Anigaa iska leh, sida aad adiguba leedahay. U socodsiiso sidaad u aragto inay habboon tahay. Waan akhrin doonaa ama uma akhriyi doono sida aan u arko inay ku habboon tahay, sida akhristayaasha kale oo kale.
Iyada oo laga jawaabayo hadda oo aan la joogin waqtiga wax kasta:
Waxaan ahay Mareykan U oggolaan maayo inay dadka kale ii sheegaan waqtiga ay ku habboon tahay inaan ku dhaqmo hadalka.
Sii wad shaqada wanaagsan, Douglas.
Nov 4, 2008 saacadu markay tahay 10:20 PM
Waan ku qoslay tan… Waxaan ku xaqiiqsaday waxay ahayd.
In kasta oo haddii aan taas ka xumaaday, waxay ka sii badnayd waxa aad ka sheegaysay Vista !! Waan qaadan karaa kaftanka siyaasadeed, laakiin kaftanka tikniyoolajiyadda? kaalay! 😉
Nov 5, 2008 at 1: 54 AM
Waxaan aqriyay balooggaaga labadii sano ee lasoo dhaafay si saraaxad leh ayaan uga argagaxay waxaad qortay. Faafreebka akhristaha kale ee akhristaha kaliya maxaa yeelay wuxuu ugu yeeray qoraalkaaga aan bislaan waa wax lagu qoslo.
Maxaad ka fileysay qoraalkaaga? Tani maahan qaar ka mid ah Mac vs. PC parody. Waa isku day ay ku dooneyso inay noqoto mid qabow oo qosol badan. WAQTIGA KHALDAN EE LAGU SAMEEYO DOOGLASS.
Waqtigaani waa xilli aad u adag taariikhda dalkeena. Saddex tiriliyan oo doolar ayaa ka baxay suuqyada sinnaanta 3dii bilood ee la soo dhaafay. Shaqo la'aantu waxay mareysaa 10 sano. Dadku waxay waayaan shaqooyinkoodii, guryahoodii, hantidoodii. Bangiyada iyo hay'adaha maaliyadeed ayaa musalaf ah. Adiguna halkan ayaad fadhiisanaysaa adigoo isku dayaya inaad tan kaftan ka dhigtid? Kadibna lasocda shaki aan wadaniyad lahayn?
AS VP oo ah shirkad weyn oo xayeysiis ah, weligay kuma shaqaaleysiin doono!
Nov 5, 2008 at 2: 18 AM
Gelin baan galiyay http://www.billkarr.com . Waxaan jeclaanlahaa inaad aqriso hadaad jeceshahayna, way fiicnaan lahayd haddaad u sheegto dadka ka akhriya bartaada wax ku saabsan.
Waa nooc ka mid ah kuleyliyaha… laakiin wax alla wixii! Waan ka gudbi doonaa! Weli waan faraxsanahay!
Nov 5, 2008 saacadu markay tahay 12:42 PM
Sideebay labo qof oo aqrinayay bartaada 2 + sano ay magacaaga u qaldamaan? Xagee waligiisse xiqdi kaftan tagtay?
Nov 5, 2008 saacadu markay tahay 9:55 PM
Miyaadan joogin balooggan waxyar. CADAALADII maxaa dhacay !? Weligay ma arag cadho iyo xanaaq intaa le’eg! Dadow, deji f de !!
Nov 6, 2008 saacadu markay tahay 12:44 PM
Tani waa booqashadaydii ugu horreysay ee barta Doug. Runtii waxaan halkan u imid inaan ka caawiyo boggeyga cusub ee sawir qaadista. Sida aan arkayo taasi macquul maahan hadda. Marka, waxaan is iri, ISKA, maxaa diidaya qulqulka qulqulka. Marka hore, aan idhaahdo sidoo kale inaan u hoggaansamo xisbi la'aan. Ma taageersani musharax siyaasadeed. Waan jeclaaday Dougs tixraaca Sen. Obama iyo Vista. 4-ta sano ee soo socota waxay si cad u taageeri doonaan tixraacaas. Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayaa in Madaxweynaha xiga uu u leeyahay saxan buuxa Madaxweyne kasta tan iyo Dagaalkii Adduunka ee weynaa, l iyo ll.
Waxaan aqriyay inbadan oo boostada ah waana inaan xuso mid, ma ahan inaan dhaleeceeyo, laakiin waxay la timid odhaah hore oo aan jeclahay. Tanya, VP ee shirkad xayeysiin LARGE ah, ayaa sheegtay in aysan shaqaalayn doonin Doug. Hadalkani wuxuu soo saaray DHAMMAAN WAKHTIGII UGU FIICANAA HADALKII ——— “CIISE AYAAN HELAY” Jawaab, Ma aanan ogeyn inuu lumay!
Mahadsanid Tanya, ma aanan ogeyn in Doug uu dalbaday shaqo.
Xiritaanka, LIGHTEN UP people. Noloshu way is beddeli kartaa dime maanta maaddaama xaaladda dhaqaale ee hadda jirta ay tahay inay taageerto. Noloshu waa gaaban tahay, ku raaxee.
Nov 6, 2008 saacadu markay tahay 3:44 PM
Hi Doug, waa jacayl iyo rajo in aan kugu martiqaadayo inaad aqbasho hoggaankeenna cusub, Barack wuxuu ballanqaaday inuu sidoo kale Madaxweyne kuu noqon doono. Waxaad tahay qof caqli badan oo dhalaalaya waadna fahamsan tahay in GW Bush uu wax badan ku qaatay oo uu sameeyay wax ka yar dimuqraadiyad kasta.
Miisaaniyadda suuqgeynta ee Obama waxay muujisay calaamadda digniinta hore ee taageerada uu haysto iyo 64 milyan oo cod, waxaan u maleynayaa inay yihiin kuwii abid ugu badnaa ee la siiyo Madaxweyne. Waxaan go aansaday inaan noqdo qof maskax furan, maxaa yeelay jamhuuriyado badan iyo muxaafid badan ayaa u codeeyay Barack. Sanadka 2012, sidoo kale
Nov 6, 2008 saacadu markay tahay 4:09 PM
Waxaan hayaa dabagal, doorashada kadib dhajiyay Obama oo la doortay taasi waxay sheegaysaa intaas uun. Waxa uu leeyahay taageeradeyda sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay in waddankan uu tallaabadaas oo kale u qaaday dhanka saxda ah.
Akhriso qoraalka dabagalka ah. Ixtiraam iyo jacayl badan,